လက်ရှိမှာ Facebook အသုံးပြုသူဘယ်လောက်ရှိနေပြီလဲ? -
Facebook ကိုအသုံးပြုလာတာ ဘယ်နှနှစ်ရှိပြီးလဲ? ၅ နှစ်လား ၆ နှစ်လား ၁၀ နှစ်လား? Update တွေမှာ ပြောင်းလဲလာတဲ့ Feature တွေ UI(User Interface) တွေကို အသားကျအောင် အသုံးပြုနေကြပေမဲ့ Facebook ကိုကမ္ဘာပေါ်မှာ လူဘယ်နှယောက်သုံးနေကြလဲဆိုတာကို သတိထားမိမယ်လို့ မထင်ပါဘူး။ မကြာခင်မှာလည်း Facebook ရဲ့မွေးနေ့ဟာ ၁၆ နှစ်ပြည့်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Facebook တောင် ၁၆နှစ်ပြည့်တော့ Facebook ကိုအသုံးပြုနေတဲ့သူ ဘယ်နှယောက်ရှိလဲ မသိဘူးဆိုတာ မဖြစ်ရအောင် လက်ရှိအချိန်မှာ Facebook ကိုအသုံးပြုနေတဲ့သူ ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းကို ဝေမျှပေးသွားချင်ပါတယ်…
တစ်ကမ္ဘာလုံး လက်ရှိအချိန်မှာ Facebook အသုံးပြုနေသူ ၂.၄၅ ဘီလီယံအထိ ရှိခဲ့ပါပြီ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း Facebook အသုံးပြုအရေအတွက်ဟာ နိုင်ငံ့လူဦးရေအရ ၉၆.၂၃ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရှိနေပါပြီ။ အကြီးမားဆုံးသော Social Media Platform တစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်နေပြီး Online Marketing Agencies တွေအတွက် Product/Service စျေးကွက်ထိုးဖောက်ဖို့ ကောင်းတဲ့ Platform တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကြီးမားတဲ့ Audience Size ရှိတဲ့ Platform တစ်ခုဖြစ်ပြီး ထိရောက်တဲ့ Marketing Strategy ရှိရင် အောင်မြင်ဖို့လွယ်ကူစေတဲ့ Platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အပေါ်မှာ ပြောပြခဲ့တာက အသုံးပြုသူ စုစုပေါင်းကို ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ကဲဒီလိုပဲ Facebook ကို နေ့စဥ်အသုံးပြုသူဘယ်လောက်ရှိနေလဲဆိုတာကို ထပ်မံဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ Facebook နေ့စဥ်အသုံးပြု အရေအတွက်ဟာ ၁.၆၂ ဘီလီယံလောက်ဟာ Facebook Login လုပ်ထားတတ်ကြပါတယ်(ဖုန်းနဲ့ ဖြစ်စေ ကွန်ပျူတာနဲ့ ဖြစ်စေ)။ ဆိုလိုရင်းကတော့ အသုံးပြုသူအားလုံးရဲ့ ၃ပုံ ၄ပုံဟာ Facebook ကိုနေ့စဥ် အသုံးပြုနေကြပါတယ်။
Facebook အသုံးက ဘယ်လိုနိုင်ငံတွေမှာ ပိုပြီး ပေါ်ပြူလာဖြစ်ပြီး၊ အသုံးပြုသူတွေရဲ့ နေရာဒေသအလိုက် ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့…
အာရှ မှာတော့ Facebook အသုံးပြုသူ ၄၁.၅ ရာခိုင်နှုန်းထိ ရှိပါတယ်
ဥရောပ မှာတော့ Facebook အသုံးပြုသူ ၁၅.၉ ရာခိုင်နှုန်းထိ ရှိပါတယ်
အမေရိက မှာတော့ Facebook အသုံးပြုသူ ၁၀.၁ ရာခိုင်နှုန်းထိ ရှိပါတယ်
အပေါ်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အသုံးပြုသူအရေအတွက် တစ်ကမ္ဘာလုံး အသုံးပြုတွေထဲနေ နေရာဒေသအလိုက် ပြန်ပြီး ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအသုံးပြုသူ ၂.၄၅ ဘီလီယံထဲမှာ ၂.၂ ဘီလီယံသော အသုံးပြုသူတွေက Mobile Device တွေကနေ အသုံးပြုပြီး ၁.၄၇ ဘီလီယံသော အသုံးပြုသူတွေကတော့ Desktop တွေကနေ အသုံးပြုကြပါတယ်။ အခုဝေမျှပေးခဲ့တာကတော့ ၁၆ နှစ်သား Facebook မှာရှိတဲ့ အသုံးပြုသူ အရေအတွက်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းတွေမှာ အသုံးပြုသူဘယ်လောက်ထိ ထပ်များလာမလဲဆိုတာကတော့ ဆက်လက်စောင့်ကြည့်သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Min Thuta/ Monday January 27th, 2020/ Blog/0Comment